Umlimi udlelwe izingulube zakhe ngoba engasokile | News24
Umlimi udlelwe izingulube zakhe ngoba engasokile
Limpopo - Amaphoyisa aseLimpopo awazange ayiqinisekise imibiko yangoLwesithathu ethi abantu besikole sokusoka bantshontshele umlimi waseLimpopo izingulube ezingu-20 ngoba engasokile ,kubike iSowetanlive ngoLwesithathu.
"Okwamanje, esingakuqinisekisa ukuthi amaphoyisa aphenya ngecala lokweba imfuyo,” kusho okhulumela amaphoyisa uColonel Ronel Otto.
"Umnikazi wepulazi wathi ngoJuni 23 kwafika abantu lapho egcina khona izingulube zakhe bathatha izingulube. Uphenyo luyaqhubeka.
Iphephandaba iThe New Age ngoLwesithathu libike ukuthi uMafole Machika, 57, uthe izingulube zakhe zebiwa abantu besikole sokusoka esiseJane Furse.
"Abantu abagasela emagcekeni ami babephethe izinduku, yizagila nezimbazo,” usho kanje.